Shenzhen Bowei Tech Co., Ltd. kuyinto ubuhle & ukhathalelo lwempilo izixhobo umniki eTshayina, apho ihlanganisa ukuphanda & asakhasayo, imveliso, intengiso, kunye nenkonzo aftersale kunye. Ukususela ukusekwa inkampani yethu, zonke umsebenzi wethu uye noko umgangatho inkqubo esemgangathweni ISO9001.
Sele kumisa inkqubo esemgangathweni isiqinisekiso olupheleleyo lakha epheleleyo womnatha yokuthengisa kunye afterales inkonzo kwimarike yasekuhlaleni. Xa tocater Ukuze uphuhliso lorhwebo, kunye neemfuno abathengi ', asizange siyeke ukwenza iinzame ikhuphe imveliso olungcono kunye nenkonzo emva-ukuthengiswa.
"Ukunika imveliso ekumgangatho ophezulu inkonzo awongamileyo"-nkqubo wethu esemgangathweni. "Satisfaction we iinkonzo na umgangatho wenkonzo" na marketingstrategy wethu. UMoya ekulandeleni Obusemagqabini ubunjani inkonzo engcono kwenza imveliso yethu nje kuphela China, kodwa kuMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi-Mpuma, eYurophu, Australia nomNtla Melika, ekubeni igama eliphezulu phakathi abathengi lethu ezivela kulo lonke ihlabathi
IPL Skin Unyango , Aromatherapy umkhumbi yobuso , Home Sebenzisa Cold ebusweni umkhumbi , Ulusu ngokuqinisa Radio Wave Frequency Machine , Light Uxela IPL Hair Ukususwa Machine , Infrared EMS Machine ,